【Priv.Tatami 2】Isiteshi samahhala landa i-WiFi yamahhala yebhayisikili - I-Airbnb
【Priv.Tatami 2】Isiteshi samahhala landa i-WiFi yamahhala yebhayisikili
198 okushiwo abanye
和歌山市, 和歌山県, i-Japan
Ikamelo e-ihostela ibungazwe ngu-Hiroko
U-Hiroko Ungumbungazi ovelele
- Kuyisitayela esidala saseJapan lapho isithombe segumbi laseJapan.
- Igumbi le-tatami elibanzi seliyisitayela lapho ngibekwe khona i-futon. Ingahlalisa abantu abangafika kwabangu-3 zikhathi zonke. -Amakamelo okugeza amabili nendlu yangasese eyodwa, sicela nisebenzise ngokuhlanganyela.
· I-WiFi yamahhala futhi ifakwe ne-PC ekamelweni!
- Uma uhamba ngebanga lokuya esitolo esidayisa ukudla, i-Don Quixote(izimonyo, ukudla ngo-10am~3am), amathaveni, izindawo zokudlela, iziphethu ezishisayo ezizungeze ihostela.
Amakamelo amadala aseJapane ahlotshiswe ngendlela yezithombe futhi ungakwazi ukuphumula i-tatami efudumele nefudumele. Ilineni lombhede i-futon yesitayela saseJapan.
Abantu abangafika kwabangu-3. I-Wi-Fi yamahhala, ikhompuyutha, isimo somoya, amathawula, ikhofi netiye lesi-Japanese. Nezinye izivakashi zihlanganyela ishawa, indlu yokugezela, i-microwave, iketela likagesi, isiqandisi, izitsha nokunye.
Ziningi izitolo njengoba kusemgaqweni lapho ungena khona endaweni yezitolo.
Ukuhamba ngezinyawo iminithi elingu-1 ukusuka e-Don Quixote kanye nesitolo sezinto ezilula. Kukhona indawo yokucima ukoma kwamakhelwane. Kunezitolo eziningi, ungadla i-ramen, i-Izakaya (njengamabha), izoso yokosa, ama-udon noodle, amabhikawozi, amakhefi, iziphethu ezishisayo nokunye.
4.91 · 198 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-198
Ingaphakathi elihlotshiswe ngekamelo elidala laseJapane, ungakhululeka njengendlu yakho nge-tatami. Umkhawulo wabantu abangu-4. I-WiFi yamahhala ne-PC ifakwe! Ziningi izitolo ngoba isendaweni engena emhumeni wezitolo.
Kuyimizuzu emi-2 ngezinyawo ukusuka e-Don Quixote(izimonyo, ukudla ngo-10am~3am) kanye ne-30sec ukuya ezitolo ezilula. Kukhona indawo yokucima ukoma kwamakhelwane. Kunezitolo eziningi ezingadla i-Ramen, i-Izakaya(njenge-pub), i-Yakiniku BBQ, i-Udon, i-Bakery, Ikhefi njll.
Izivakashi zinethemba, uma kungenzeka lapha.
Uma unenkinga, sicela usithinte. Ngangokunokwenzeka ukusekela.
UHiroko Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: I-Hotels and Inns Business Act | 和歌山市指令保生 | 2470
Hlola ezinye izinketho ezise- 和歌山市 namaphethelo